रुपन्देहीमा अझै घटेन बालविवाह: गाउँपालिका... :: अशेष अधिकारी :: Setopati
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख १
'त्यतिबेला म गाउँमा गठन भएको किशोरीको बालक्लब अध्यक्ष थिएँ। हामी बारा जिल्ला घुम्न जाँदा त्यहाँका किशोरकिशोरीको वातावरण हेरेर फर्किएपछि मैले पनि गाउँमा जसरी पनि बालविवाह रोक्ने अठोट बोके ', उनी भन्छिन् ।
'ठिक छ म विवाह गर्छु तर अर्काको घरमा गएर काम गर्ने, उनीहरुको सेवा गर्ने मेरो उमेर भएको छैन, मेरो पढ्ने उमेर हो केटाको घरमा तपाईहरु जानुपर्छ ', घरमा उनले यस्तो भन्दै
हरेक वर्ष विवाहको लगन आउँदा उनले बुवाआमालाई यस्तै गरी सम्झाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछिन्, 'एकपटक सम्झाएपछि मान्नु हुन्छ तर गाउंका कसले के कुरा सुनाउंछ अर्को लगन शुरु भएपछि फेरी विवाहको कुरा चलिहाल्छ ।'
'अझै ३-४ वर्ष सम्म त जसरी पनि थेग्छु जस्तो लाग्छ', उनी थप्छिन्।
भन्छिन् 'बालविवाह गरेकाहरुलाई उमेर पुगेपछि विवाह गर्नेहरुलाई भन्दा धेरै मानसिक दवाव हुन्छ, शारिरीक रुपमा कमजोर देखिन्छन्, निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुंदैन, शिक्षा-रोजगारीमा पनि पछि नै परेका हुन्छन्। यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेपछि बुझ्ने खालका अभिभावकहरु बुझ्नुहुन्छ नबुझ्नेलाई त जवरजस्ती गर्ने कुरा पनि भएन ।”
'पहिले १०-११ वर्षमा विवाह गरिदिन्थे अहिले उमेर थोरै बढेर १४-१५ वर्ष पुगेको छ हामी यसैलाई बालविवाह रोकिएको भन्दै गफ दिन्छौं', उनी थप्छिन् , '२० वर्ष उमेर पुगेर विवाह भएको हाम्रो गाउंमा एकजना पनि छैन ।'
'सानोमा विवाह गर्यो भने पछि कस्तो समस्या आउँछ भन्ने समेत बुझ्ने उमेर थिएन । बुवाआमाले तिम्रो उमेरका गाउँका अरु केटाहरुको विवाह भयो तिम्रो पनि गर्नुपर्यो भन्नु भयो विवाह भयो ।'
'गौना हुंदा ११ कक्षामा पढ्दै थिए, श्रीमती घरमा ल्याएपछि कमाउनतर्फ लाग्नु पर्यो। श्रीमती पाल्ने जिम्मेवारी थपियो पढाईलाई निरन्तरता दिन सकिन ।' आफूले जस्तो पीडा अरुले पाउनु नपरोस भन्दै उनी अहिले बालबिवाह बिरुद्धको अभियानमा हिडिरहेका छन् ।
बुवाआमाले केटाको घरमा जान कर गर्न थाले “तँ घर गईनस् भने हाम्रो ईज्जत जान्छ ।'
'म घर नगए बुवाआमाको ईज्जत जान्थ्यो तर मेरो त जिन्दगीको सवाल थियो ।'उनले घरमा नजाने निर्णय गरिन् । अहिले उनले गाउंमै औषधी पसल खोलेकी छन् ।
कोटहीमाईकी सरिता यादव बालविवाह गरिदिने परिवारलाई गाउँपालिकाले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नसके मात्र बालविवाह रोक्न सकिने बताउँछिन् । 'खुल्ला दिशामुक्त अभियानमा शौचालय नबनाउने परिवारलाई गाउँपालिकाले दिने विभिन्न सिफारिस र सेवा सुविधा रोकेपछि बल्ल शौचालय बनाउन दवाव पर्‍यो बालविवाह रोक्न पनि यस्तो नियम बनाउन किन सकिदैन ?'
'पहाडी समुदायमा २० वर्ष ठिक छ तर तराई क्षेत्रमा घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्छ । विवाहको लागि कानुन बनाउने अधिकार गाउँपालिकामा आयो भने म घटाएर १८ वर्ष बनाउँछु ।'
एउटै देशमा दुई थरी विवाहको कानुन सम्भव होला त ? भन्ने प्रश्नमा उनि भन्छन् 'एउटै देशमा दुईथरी मानिस बस्न सक्छन् कानुन किन बन्न सक्दैन ?'। पहाडी मुल र तराई मुलको मानिसमा आआफ्नो धर्म र पहिचान हुन्छ ।' तराई क्षेत्रमा विवाहको उमेर १८ वर्ष बनाउदा ठिक हुन्छ उनी भन्छन् ।
'बालबालिकाको समस्या मात्र हेरेर भएन नी अभिभावकको, जनताको समस्या पनि त हेर्नुपर्यो। कानुनको कार्यान्वयन गर्रौ सामाजिक परम्परा बाहिर जानुपर्छ, सामाजिक परम्परा स्वीकार गरौं कानुन उलंघन गर्नुपर्छ हामी संकटमा छौं ।' उनले समाज र कानुनको विचमा खाडल रहेको बताउँछन् ।
'विवाहमा गयो भने अध्यक्षको अगाडी नै बालविवाह भयो भन्छन् त्यो भन्दा निम्तो मान्न नै नगए त भईहाल्यो नी ।'
'एकजनालाई भएपनि बालविवाह गरेकोमा कारवाही हुन सके त्यही घटना देखाएर पनि अरुले डर मान्छन् तर उजुरी नै आउदैन ।'
'तराई क्षेत्रमा जति धेरै पढ्को केटा भयो त्यति धेरै दाईजो माग्छन् के गर्ने गरिब परिवार कहांबाट दाईजो देवोस् त्यो भन्दा सानैमा विवाह गरिदिएर दाईजोको समस्याबाट उम्किन खोज्छन् ।'
नेपाललाई सन् २०३० सम्म वालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्य रहेको छ । तर भारतसंग सिमा जोडिएको र तराईका धेरै किशोरकिशोरीहरुको भारतमा लगेर विवाह हुने गरेका कारण पनि सरकारको यो लक्ष्य पुरा होला भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १, २०७५, ०६:२२:२७